Lammileen Keeniyaa 4 kan Ji'a tokko dura Biskileetaan Imala Hajjii jalqabanii turan Sa’uudii seenan. - NuuralHudaa
Last updated Jul 23, 2019 8
Lammileen Keeniyaa 4 guyyaa 43 dura magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii irraa Sirna Hajjii bara kanaa irratti hirmatuuf Biskileetaan imala isaanii kan jalqaban yoo ta’u, daangalee Ityoophiyaa fi Sudaan Biskileetaan akkasumas Galaana diimaa dooniin qaxxaamuranii nagayaan har’a Sa’udii kan gahan tahuu odeeyfannoon ni addeessa.
Hujaajjoonni kun Naayiroobii irra haga Magaalaa Kabajamtuu Makkaa Kilometra 4500 guyyaatti kilometra 100 Imaluun guyyaa 45 keessatti magaalaa Makkaa gahuuf karoorfattan. Kayyoon imala kanaa gamoo Mana barumsa Islaamaa Al Furqan kan magaalaa Naayiroobii ijaarsisuuf galii walitti qabuuf tahuu ibsan.
Imala HajjiiSa'uud Arabiyaa